एकाविहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन पुगे राष्ट्रपति निवास ? – YesKathmandu.com
एकाविहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन पुगे राष्ट्रपति निवास ?
बुधबार १७, जेठ २०७४
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समय पछाडि शितल निवास पुग्दैछन । त्यहाँ उनले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको । प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालयका अनुसार साढे ९ बजे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत असार ९ गते राजीनामा गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सातदिन भित्र सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आव्हान गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले दिएको सात दिनकोसमय सीमा आज सकिदैछ ।
यस्तो अबस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिको सरकार गठनको सम्भावना कम देखिएकाले बहुमतिय प्रक्रियाका लागि आव्हान गर्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह गर्ने सम्भावना छ । राष्ट्रपतिले बहुमतिय सरकार गठनका लागि आव्हान गरेलगत्तै संसद सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।
काँग्रेसले हिजो आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठनका लागि सहमति जुटाउन भन्दै संसदमा प्रतिनीधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय वैठक आव्हान गरेको थियो । तर, काँग्रेसले बोलाएको वैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने सहभागी भएको थिएन् । काँग्रेसले आफ्नो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ । सोही विषयमा जानकारी गराउनका लागि प्रधामनन्त्री प्रचण्ड शितल निवास प्रस्थान गर्न लागेका हुन ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले डाके मन्त्रिपरिषद्को वैठक, निर्वाचनको मध्य अषाढमा सारिने
कोरिया र इजरायल पनि निःशुल्क पठाउनुपर्ने !
धर्म परिवर्तन र बेच्ने नियतले ओसारिन्छन् भूकम्पपीडित बालबालिका
साबेल प्रहार गरी श्रीमानको हत्या
चुलो निभाउन बिर्संदा बस्तीभरि आगो
छ सय परिवार बाढीको जोखिममा
विश्व टी–ट्वान्टी छनौटका लागि १५ खेलाडीको नाम घोषणा
लोकमानसँग गोविन्द केसी किन भएछन ‘फायर’ ?
प्रचण्डको हैसियत लाजिम्पाट महल होइन बाग्मतीको झुप्रो हो
फोरमलाई तीन मन्त्रालय दिन ओली र दाहाल सहमत, मन्त्रालयको संख्या थपिदै
मेसीलाई सन्यास फिर्ता लिन अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति र म्यारोडोनाको विशेष आग्रह
सरकारले गर्र्यो यस्तो निर्णय
कांग्रेसको बलमा माओवादी उफ्रिरहेको छ, मलाई मन परेनः शशांक कोइराला
सरकार : कि लास चाहियो, कि सास चाहियो